तीतो तितेपातीका मिठा गुण, थाहा पाउनुहोस् किन खाने तितेपाती, पढ्नुहोस् ! | स्वास्थ्य जीवनशैली
June 7, 2021 NepstokLeaveaComment on तीतो तितेपातीका मिठा गुण, थाहा पाउनुहोस् किन खाने तितेपाती, पढ्नुहोस् !
तीतो तितेपाती स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी छ । तितेपाती नेपालका अधिकांश स्थानमा पाइन्छ । यस वनस्पतिका औषधीय गुण भने कमैलाई थाहा छ । अधिकांशले यसलाई घरपालुवा जनावरको थलामा सोत्तरका रूपमा प्रयोग गर्छन् । यस बास्नादार वनस्पतिलाई जनावरले मिठो मानेर खान्छन् । – यावत् गुणको तितेपाती स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी र औषधिको राजा मानिन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा ‘मगवर्ट’ या ‘ब्ल्याक सेज’ भनिन्छ । यसको वैज्ञानिक नाम ‘आर्टिमिसिया भल्गरिस’ हो ।
– बाली भित्र्याउनुअघि यसबाट बनेको औषधि छर्केर भण्डारण गर्दा घुनलगायत किराले दुःख नदिने हुनाले किसानका लागि यो निकै उपयोगी छ ।– तितेपातीको तेलबाट हाड दुखाइ, चिलाउने, उच्च रक्तचाप र ज्वरोको औषधि बनाउन सकिने वनस्पतिविज्ञहरूको दाबी छ । अत्तर बनाउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ।
– तितेपातीको तेल मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । कसैलाई नर्भस हुने समस्या छ भने तितेपाती र रोजमेरीको तेल मिसाएर प्रयोग गर्नाले समस्या हराएर जान्छ
– युरोपमा यसलाई एक ‘कमन हर्ब’का रूपमा खानामा प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न सुप, स्टु र सलादमा तितेपातीको फूल, पात र डाँठ पनि प्रयोग गरिन्छ । मासुका परिकारमा पनि मसलाको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ ।फ्याटी एसिड कम र भिटामिन सी पर्याप्त हुने हुँदा स्वास्थ्यका लागि यो लाभदायक मानिन्छ
– तितेपातीबाट लस्सी (स्मुथी) र जेल्ली पनि बनाइन्छ । युरोपेली मुलुकका नागरिकले मसरुम सुपमा तितेपाती मिसाउँदा चाख दिएर पिउँछन् – राइस प्यान केक, स्टिम बन, स्पिरिङ स्न्याक्स, डाइसुकु, दुनोट, डिमसमजस्ता कोरियाली परम्परागत खानामा यसको प्रयोग हुन्छ |
सावधान ! यी ७ अवस्थामा मेवा खाए गर्नसक्छ ठुलो हानी